Jabhaddaynta WADDNI waa Fashil Siyaasadeed | Gabiley News Online
Jabhaddaynta WADDNI waa Fashil Siyaasadeed
Ka dib guuldarradii siyaasadeed iyo jabkii soo food saaray hogaankii socod baradka ahaa ee WADDANI, doorashadii dalka ka qabsoontay 2017 waxa is baddalay yoolkii iyo haddafkii siyaasadeed ee xisbiga. Waxaa iskaashi siyaasadeed oo anshaxa qarannimo ka baxsan lagu mataaneeyay beeshii gudoomiyaha iyo xisbigii qarrankee WADDANI. Waxaa muddo yar ka dib bilaabmay abaabulka shir beelleed xisbigu daaha dabadiisa ka haggayay. Waxaa kasoo baxay go’aamo iyo awaamiir aan ahayn kuwii shirbeeleedadii ka horeeyay looga bartay.
Tusaale ahaan labada qodob ee hoos ku xusani waxay bud-dhig iyo musdanbeed u ahaan jireen go’aammaddii iyo mabaadiidii maslaxadda qaranka ku suntanaa ee kasoo bixi jiray shirarkii beelaha Somaliland qabsan jireen muddadii ay Jamauuriyada Somaliland jirtay, marka laga reebo shirkii Buurta Gacan Libaax uga qabsoomay xisbiga WADDANI oo isagu ka dhashay guuldaraddii xisbigaa iyo sad bursi tuhun iyo malle-awaal ku salaysan oo beesha gudoomiyihii guuldaraystay ku tilmaantay inay tirsanayso. Labadaa qodob waxay kala ahayiin:
1 > Beeshu Waxay Taageersan tahay Midnimadda, Madaxbanaanidda iyo Gooni isku taaga Jamhuuriyadda Somaliland?
2 > Beeshu waxay diyaar u tahay nabad kula noolaashaha, walaatinimadda iyo Derisnimadda Guud ahaan beelaha kale ee Somaliland?
Labaddan qodob sidaan sare kusoo sheegay kumay jirin war-murityeedkii ka soo baxay shirkii Buurta Gacan Libaax. Waxaana loo sababeeyay wax lagu sheegay Sad-Bursi iyo saami qaybsi dhan ka raran balse la odhan karo waxa lagu saleeyay shax malle-awaal ah oo qiil loogu doonayay mucaaradnimada beelaysan iyo jabhada xisbigu u aassaastay kasoo horjeedka jiritaanka, midnimada, wadda noolaanshaha, walaaltinimada, derisnimada iyo madaxbanaanida Somaliland oo falalkeedii u danbeeyay aad halkan ka dheehan karto http://garadagnews.net/warar/daawo-sawirro-jabhada-taliye-caare-oo-gaadhigi-gurmadka-caafimaadka-degmada-xiis-dhexda-uu-gashay-oo-afduubay-iyo-tageerayaasha-xisbiga-waddani-oo-ka-dhex-muuqday-jabhadaasi/.
Waxaa ku cad shaxdan hoose in tabashada beesha (ee xisbigu hagayay) ee saami qaybsigu tahay yool habaabin maadaama mansabyadda ay beeshu ka heshay dawlada cusub ay ugu yaraan u dhigmaan kuna sargo’anyihiin xilalkii ay ka heshay xukuumaddii Maddaxweyne Siilaanyo, Daahir Riyaale iyo Cigaal ba. Xilalkaasoo kal ah:
Haddaba si’aad u fahanto halkay salka ku hayso tabashada saami qaybsigu waxa haboon in aynu milicsano go’aammaddii shirka buurta gacan libaax kasoo baxay. Waxaan hoos tusaale ahaan idiin soo dhigay, is bar bar dhig diirada saaraya, sadex ka mida shirarkii beelaha qaar uga qabsoomay Somaliland iyo mabbaadiiddii kasoo baxay, waxay ku kala duwan yihiin iyo mid waliba halkuu ka taagnaa qarannimmadda iyo jiritaanka Somaliland.
Go’aammaddii shirkii beesha Garxajis Gacan-Libaax 1 July, 2018
Go’aammaddii shirkii beesha Habar Jeclo Gar-adag, 17 August 2008
Go’aammaddii shirkii beesha Subeer Awal Agabar, 26 September 2013
1- Shirweynaha beelaha Garxajis ee Tolwanaaje-2,waxa uu cadaynayaa in si buuxda la iskula qaatay midnimada Garxajis
Go’aammadani waxay caddaynayaan in aanu shirkani ahayn shir beelleed ka turjumaya dannaha beesha, degaamadeeda, horumarinta kaabayaasha nolosha, wax qabadka dawlada iyo wixii la mida balse uu ahaa shir xisbi iyo mabbaadii siyaasadaysan oo ka fikir duwan kuwii shirbeelleed yadii hore kasoo bixi jiray (adba ila eegoo is ku miisaan). Qodobkiisa koowaad wuxuu si caadifadaysan u daadafaynayaa jiritaanka Somaliland waxaanu ka hor immanayaa qaranimada isagoo waynaynaya inay muqaddastahay midnimmadda beeshu. Qodobkani wuxuu gogol xaadh iyo saadaal rumowday u yahay jabhadda uu xisbiga iyo beesha lamaani samaysteen. Qodobaddan baddankoodu waxay isugu jiraan ammar, hanjabaad, inkiraad nataiijadii doorashadii 2017, goodi iyo cagga juglayn ka baxsan soo jeedintii iyo talo waddaagii shirarkii hore beelaha Somaliland u qabsoomi jiray.
Waxa kalooy go’aamaddii iyo awaamiirtii shirkan kasoo baxay ka aradnaayeen anshaxa nabadda iyo wadda noolaanshaha, dhawrida ammaanka, wadda jirka iyo is dhex galka beelaha. Waxa eedo iyo dhaliilo malle-awaale lagu beegsaday beello lagu eedeeyay inay 65% shaqaalaha dawlada isku ekaysiiyeen. Siyaasiyiin, Salaadiin, Cuqaal iyo waxa garadba waxa cod ka gacan taag ah lagu ansixiyay kala sooca bulshada. Haldoorkii cod ka gacanta taaga ah shirka ku guubaabinayay waxaa ka mid ahaa Cabdirahman Maxamed Cabdilahi Cirro, Buubaa, Siciid Sulub iyo hormuudkii Musdanbeedka Xisbiga WADANI. Ka sakaw nacaybka iyo kala sooca bulshada, waxaa ka muuqda qodobada qaar siiba ka 8aad qayra masuulnimo laga dhadhansan karo in halkii maare loogu daydayi lahaa collaada labadan beelood ee walaalaha ah ee Ceel Afwayn wadda dagga, la doonayay inay dhibtoodu sii riiq dheeraato. Waxaa qodobkaasi si xaqiiqada ka fog meesha uga saaray in, inbaddan dowladan iyo tii ka horaysayba isku dayday sidii loo soo afjari lahaa collaada labada beelood ee walaalaha.
Waxaan muran ka taagnayn in aasaasayaasha Jabhadda Caare ay hormuud ka yihiin Siyaasiga, Salaadiinta, Cuqaasha, Xildhibaanadda iyo wax garadka ay hor kacayaan siyaasi Buubaa, Ciro, Siciid Sulub iyo labeentii musdanbeedka xisibiga WADDANI. Waxaa ayaan daarro ah in shaqsiyaadkii 27 kaa sanee Somaliland jirtay manaafacaad sanayay dheefteeda ay maanta ka middaysan yihiin una tafaxayteen dibbin daabyada dalkan iyagoo garabsanaya caddawga Jammuuriyadda Somaliland. Waxaan caqliga fayaw ee dadka samaha iyo wanaaga jecel ka dhaadhici-la in xisbiga WADDANI iyo beeshu isku qanciyaan kuna midoobaan ficilada kalla fogaynaya bulshada. Waa kallamaan iyo kaaf iyo kalladheeri in siyaasiga WADDANI uu ula kac ugu heegganaado burburinta qaranka 27 ka sano la yab yabayay marka uu dantiisa gaarka ah ka arki waayo, isagoo mucaaradnimo iyo tabasho malle-waalla dhufays ka dhiganaya.
Waxa mudo dheer raadkii iyo riiqdii ay ka tagtay la dhayayay bulshaddanna la ilawsiinayay collaadihii ay hor kacayeen siyaasi Buubaa, Jaamac Yare iyo Ina Mire. Waxaa lagu guulaystay muddadii uu xilka hayay AHN Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Daahir Riyaale Kaahin in loo gudbo dawladnimo ku dhisan asxaab oo qofku ciduu doono dooran karo isna la dooran karo waana ta keentay in isla beesha garxajis hormuud ka noqoto hogaanka laba xisbi qaran iyo golaha baarlmaanka muddo 12 sanood ah. Waxaa halkii ay labaddaa Maddaxweynee hore, kaga tageen kasii ambaqaaday Maddaxweyne Ahmed Maxamed Maxamoud Siilaanyo oo isna markii muddo xilleedkiisii dhamaaday hogaanka ku wareejiyay Maddaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kusoo baxay 80,000 oo cod oo uu dheeraaday dhigiiisii la tartamayay Cabdirahman Maxamed Cabdilahi Cirro. Nasiib darrose sidii looga bartay hoggaamiyaashii hore ugu tartamay jaggadda madaxweynaha (Sida, Silaanyo 2003, Riyaale 2010) oo markay guuldaraysteen garwaaqsaday najiitadii komishanka qaranku ansixiyay, Guddoomiye Cabdirahman Maxamed Cabdilahi Cirro wuxuu isagu doorbiday inuu olole dhagaraysan oo dhiig ku daatay ku baaqo. Wuxuu qaadacay doorashadii, wuxuu ku dhawaaqay in la boobay. Wuxuu ku qanciyay taageerayaashii xisbigiisa inaanay aqbalin doorashadii 2017. Wuxuu Gudoomiye Ciro lix bilood doorashada ka dib socod ku maray gobolada dalka oo dhan isagoo wali ku guubaabinayay taageeriyaashii xisbiga WADDANI in aanay doorasho xor ahi Somaliland ka dhicin dawladuna aanay mid xalaal ah ahayn. Wuxuu naxligii, kala fogayntii iyo isku dirkii bulshada ula safray Europe oo muddo laba bilood ah uu haddana halkaa ka wadday kala qaybintii bulshada iyo kala soocii caadifadaysnaa, kaasoo aakhirkiina biyo dhigtay buurta gacan libaax. Qaybinta, qoqobka, kala fogaynta, kala sooca, jabhaddaynta WADDANI iyo siyaasiga beeshu ka middaysan yihiin noqon mayso wax Somaliland inteeda kale lagu cabsi galiyo. Qori caarraddiina lagu helimaayo wixii cod lagu waayaye halla tix galiyo nabbadda iyo waddanoolaanshaha bulshada walaalayaal.